Ajụjụ - Xi'an Homey Technology Co., Ltd
Waterproofing geosynthetics ihe
Q1: Olee ebe a na-gị na ụlọ ọrụ dị?
A: Anyị ụlọ ọrụ dị na Xi'an, Shaanxi Province, China.
Q2: nwere ike ị na-enye a sample anyị?
A: Ee, Anyị nwere ike izipu free n'omume, ma ahịa mkpa iji kwụọ ibu.
Q3: Gịnị bụ gị kacha nta iji ibu?
A: The kacha nta iji ibu bụ 5000 square mita, ma ọ bụ agbanweli.
Q4: Gịnị bụ ịkwụ ụgwọ gị okwu?
Q5: Gịnị bụ gị nnyefe oge?
A: Production oge na-emekarị na-efu 3-5 ụbọchị, mmepụta ike: 5000-7000 square mita kwa ụbọchị.
RO na mmiri ọgwụ usoro
Olee ụdị mmiri na isi mmalite ka ọ na-emeso?
Laa azu nwayọọ nwayọọ amịkọrọ bụ ezigbo mmiri ọgwụgwọ ngwọta na ọtụtụ ụdị nke water.tap mmiri, a makwaara dị ka ọchịchị isi mmalite, undergroundwater, nke na-agụnye brackish mmiri, na saltwater. The nnukwu ihe dị iche n'etiti ndị a atọ ụdị bụ Total etisasịwo solids (TDS) ọdịnaya nke ọ bụla ụdị. Dị ka a na-achị nke isi mkpịsị aka, na American Health Association na-achọ ka mmiri ọṅụṅụ bụ n'okpuru 2,000 PPM TDS.Reverse nwayọọ nwayọọ amịkọrọ bụ mgbe eji a mgbata mmiri na gburugburu ebe obibi iji belata ekweghị ekwe, ma ọ bụ na ụmụ irighiri ihe edebe mmiri si njem na metal ọkpọkọ. Total etisasịwo solids bụ mgbe a lekwasịrị nke mmiri dị ọcha na mgbata mmiri systems.Underground ọdọ mmiri na-abụkarị brackish, nke pụtara na ha nwere nnukwu mpịakọta nke nnu, ma ọ bụghị iji na--atụle mmiri nnu. Groundwater esiwak ọcha maka agriculture ụlọ ọrụ, na Ngwuputa ụlọ ọrụ. Groundwater bụkwa a na ịna iche nke bottling ụlọ ọrụ, n'ihi na ihe pụrụ iche ịnweta n'ịgwa emekarị nwere ihe na-adọrọ adọrọ uto.
Nnu mmiri reverse nwayọọ nwayọọ amịkọrọ (akpọ mgbe ụfọdụ ka desalination) bụ na-atụgharị atụgharị nke saltwater n'ime mmiri ọṅụṅụ. Ocean mmiri nwere ruo 45.000 PPM TDS. Nnukwu ojiji nke desalination abịa na-enye mmiri na ebe ndị na-enweghị a mgbe ọkọnọ nke ọhụrụ mmiri.
Bụ pretreatment dị mkpa?
Ọ dị ezigbo mkpa na nri mmiri preconditioned iji chebe membranes si fouling eme akaghi failure.The akpụkpọ ahụ na-wuru nke a porous ihe onwunwe na-enye ohere mmiri gabiga, ma jụrụ ruo 99% nke etisasịwo solids n'elu ala. The etisasịwo salts na-lekwasị ajụ mmiri (brine stream), ebe ha na-atara imefusị. Wepụ ihe tupu bụ isi ihe na-ekwe ka RO usoro ime ihe e zubere ka ọ do.As na RO System na-aga n'ihu na-arụ ọrụ, etisasịwo na kwụsịtụrụ solids na ndepụta mmiri na-akpọkọtara tinyere akpụkpọ ahụ n'elu. Ọ bụrụ na ndị a solids na-ekwe ka na-ewuli elu, ha mechara, machibido Itie mmiri site membranes, dapụtara na a na ọnwụ nke throughput. (The throughput ike nke membranes na--ezo dị ka ndị agbanwe agbanwe oge ọnụego, na tụrụ na lita kwa square ụkwụ nke membranes n'elu ebe kwa ụbọchị.)
Ọ dị mkpa na-a mmiri analysis?
A zuru ezu chemical analysis (LSI, SDI, ma ọ bụ CFI) nke RO oriri mmiri dị oké mkpa maka ịmata nwere foulants. Nke a ga-agụnye a na-amata ọtụtụ ndị ekweghị ekwe (calcium na magnesium), barium, strontium, alkalinity, onye Onyenwe anyị +, na chlorine. The data si chemical analysis nwere ike ji site injinia emebe usoro iji chọpụta kacha
akpụkpọ ahụ n'usoro ga ma na-ebelata àgwà nke ọnụ ọgụgụ na nkwụnye ego guzobere na jirichaa mgbake na agbanwe agbanwe oge ọnụego.
Gịnị na-ekpebi kpọmkwem pretreatments maka otu RO?
Na otu onye okwu: analysis. Kwa isi iyi nke mmiri dị iche iche, na gị mgbe ihe bụ gị mmiri ruo mgbe ị nwere ya nyochaa. The mmiri analysis, LSI, SDI, ma ọ bụ CFI ụkpụrụ na-eji iji chọpụta kpọmkwem pretreatment chọrọ maka a akpan akpan RO System. Ebe ọ bụ na mmiri onunu iche iche site n'otu ebe ruo n'ebe ọzọ, onye ọ bụla pretreatment chọrọ ga-adị iche.
Ndi ndepụta mmiri mkpa ka a jụrụ site RO?
Ion mgbanwe bụ a na-ewu ewu usoro nro ma mbenata ike ịnweta ọnụ ọgụgụ guzobere na akpụkpọ ahụ n'elu. Ion mgbanwe softening eji sodium dochie scaleforming ion dị ka calcium, magnesium, barium, strontium, ígwè, na aluminum iji gbochie mmebi nke akpụkpọ ahụ ọcha. The sodium forms nnọọ soluble salts, nke na-ngwa ngwa jụrụ site Reverse nwayọọ nwayọọ amịkọrọ System na-eme bụghị ngwa ngwa na-etolite ịnweta akpịrịkpa na akpụkpọ ahụ n'elu. A sodiumcycle softener na-regenerated na sodium chloride brine. The nọrọ regenerant, tinyere softener itucha mmiri, ga-atara imefusị. Ọ bụ n'ihi na nke a na ion mgbanwe na-atụ aro maka ngwa na-nwere nnukwu metal ọdịnaya na-emeso mmiri.
Bụ acid injection dị mkpa?
Dị nnọọ ka acidic ngwọta na-adịghị mma n'ihi na membranes, caustic ngwọta na-dokwara emebiri akpụkpọ ahụ ọcha. Acid injection nwere ike webata RO pretreatment usoro ịchịkwa onye Onyenwe anyị + na-ebelata ọnụ ọgụgụ na-akpụ ọchịchọ nke na ndepụta mmiri. Acid injection gosiri na ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ na-akpụ ọchịchọ nke brine stream bụ n'elu +0,3 ka tụrụ site LSI. Ma na igirigi ibu sulphuric ma ọ bụ hydrochloric acid nwere ike ji mee ihe maka nzube a.
Gịnị ka ihe antiscalant ime?
Antiscalants e meere ịdị irè inyịme etiti oge n'etiti chemical cleanings nke RO membranes. Ngwaahịa ndị a na-adịkarị chepụtara na-agụnye inorganic phosphates, organophosphates, na dispersants. Ụfọdụ Antiscalant nwere ezighị ebubo Polymers na dispersants na ike na-eme na cationic Polymers na e nwere ike dosed elu stream tupu media nzacha. The Antiscalant ga-dakọtara na ndị a Polymers; ma, mmeghachi omume ngwaahịa ga ndedehe na membranes.
Ime ihe nile na usoro-achọ chemical akwa?
N'agbanyeghị mgbalị nile iji chebe usoro si fouling na-atụfu agbanwe oge, n'ikpeazụ, membranes ga achọ chemical ihicha. A welldesigned RO usoro ga-agụnye ndokwa a ihicha skid ikwado ihicha usoro. The skid kwesịrị ịgụnye a chemical tank, ngwọta okpomọkụ, recirculating mgbapụta, uzo, hoses, na ihe ndị ọzọ nile na njikọ na oyiyi akwa chọrọ maka ịrụzu a zuru chemical ihicha nke RO modul.